Nhau - Evonik: Kugadziriswa muChinese 3D yekudhinda nyanzvi UnionTech - Zvishandiso zvitsva zvekuita photopolymer resins mukutarisa
Evonik akawana chidimbu chevashoma mukambani yeChinese UnionTech kuburikidza neiyo Venture Capital unit. Iyo Shanghai-based kambani iri kushanda mumunda we stereolithography 3D kudhinda. Iyi yekuwedzera yekugadzira tekinoroji inoita kuti zvikwanisike, kuburitsa yakanyatsojeka uye yakadzama polima zvikamu. Bernhard Mohr, mukuru weVenture Capital unit: "Tinotarisira kufambira mberi kukuru kwehunyanzvi mumunda we stereolithography. Evonik arikugadzirira kuvhurwa kwezvinhu zvakagadzirira-kushandisa izvi maitiro. Kuisa mari kwedu nekudaro hakuna kunangana chete nekudzosa mari nemari, asi pamusoro pezvese pakuziva mashandisiro eiyi nzira. " Evonik anotarisira kukurumidza kuwana musika kweiyo nyowani photopolymer zvigadzirwa, kunyanya mumusika unokurumidza kukura weChina, Mohr akaenderera mberi.
Mukuita kwe stereolithography chikamu chacho chinodhonzwa kubva mubhavhu remwenje-unorapa mvura resin. Laser kana kuratidza mwenje masosi anorapa iyo photopolymer dura neyakagadzika, zvichizoguma nechetatu-chidimbu chigadzirwa. Nenzira iyi, kugadzirwa kwezvinhu zvakaoma kwazvo zvinogoneka, izvo zvine chimiro chakatsetseka uye chakasimba kupfuura mamwe maitiro e3D. Misika yakajairika inosanganisira vanogadzira mota uye nendege pamwe nezvidimbu zvemaindasitiri kana shangu dzakakosha.
Thomas Grosse-Puppendahl, mukuru weAdvitive Manufacturing Innovation Growth Field kuEvonik, anoona kudyara sekuwedzera kwakanyanya kune iyo iripo portfolio. Evonik arikugadzirira kuunzwa kwegadziriro yezvinhu zvitsva kumusika senzvimbo yekutanga yeboka idzva INFINAM® photopolymers chigadzirwa tambo. "Nekuuya kwekuuya kwezvigadzirwa zvitsva uye kutora chikamu kwazvino muUnitedTech, tiri kuwedzera mabasa edu semubatsiri akavimbika weiyo indasitiri mukugadzira nekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekudhinda kwe3D kusimbisa zviitiko zvedu zvebhizimusi pane zvakakosha photopolymer technology, ”anodaro Thomas Grosse-Puppendahl. Pamusoro peiyo polymer portfolio yeupfu-based maitiro uye biomaterial filaments yehunyanzvi hwekurapa, Evonik inopa huwandu hwakawanda hwekugadzirira-kushandisa-resini yephotopolymer-based tekinoroji kuitira kuti ienderere kusiyanisa mamiriro ezvinhu epasi rose e3D musika wekudhinda. , sekureva kwaGrosse-Puppendahl.
Evonik akaisa mari mumakambani mazhinji mumunda wekuwedzera zvigadzirwa kuti atsigire kuvandudzwa kweiyi indasitiri. Inishuwarenzi yeUnionTech inozadzisa zvakakwana huripo hunyanzvi hwaEvonik hwemabasa ekudhinda e3D uye iri rechipiri kudyara kwe3D muChina
UnionTech inoonekwa semutungamiri wemusika muAsia kune epamhepo-yakakura saizi maindasitiri anodhinda. Iyo kambani inogadzira uye inogadzira maprinta, inopa zvekudhinda zvinhu kuburikidza nemabhizimusi uye inopa yekuwedzera yekugadzira seye mupi webasa. Izvi zvinopa iyo kambani tarisiro yakazara yeiyo 3D kunyorera. UnionTech yakavambwa mugore ra2000 uye ine vashandi vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe. Jinsong Ma, General Manager weUnionTech, anotambirawo kutora chikamu kwekambani yemakemikari ine hunyanzvi kubva pane imwe nzira yekutarira: Izvi zvinoita kuti kambani ive yakanaka mudiwa kuti irambe ichikura nesu. "Izvi zvinotipa mukana wekuwana zvakananga kune izvo zvinhu zvatinoda kune vatengi vedu."
UnionTech ndeya vazhinji veChinese vanoita zvemari pamwe nevatungamiriri vekambani. Izvo zvakabvumiranwa kusaburitsa huwandu hwenzvimbo yekudyara.
Nhau dzeWeitere im plasticker